facebook(facebook) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
फेसबुकले जियोको १०% हिस्सा किन्ने
काठमाण्डौ । विश्वको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भारतको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम कम्पनी रिलायन्स जियोको १० प्रतिशत हिस्सा खरिद गर्ने चाहेको खुल्न आएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार जियोको बजार मूल्यांकन ६५ देखि ७० बिलियन डलर अर्थात् भारु ५ हजार करोडभन्दा माथि रहेको छ। यस्तो यदि फेसबुकले १० प्रतिशत हिस्सा किन्ने हो भने उसले...
फेसबुकले आफ्ना कर्मचारीलाई १ हजार डलर बोनस दिने
काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरिएको कोरोनाभाइरसबाट सिर्जित परिस्थितिसँग लड्न आफ्ना कर्मचारीहरुलाई १ हजार डलर बोनसका रुपमा वितरण गर्ने भएको छ। फेसबुकले यो बोनस दुर्गम ठाउँमा बसेर काम गर्ने, कोरोनाका कारण घरमै बसेर काम गर्ने र बालबच्चालाई हेरचाह गरेर बसिरहेका कर्मचारीलाई वितरण गरिने स्पष्ट पारेको...
काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नयाँ टुल लन्च गरेको छ । जसबाट फेसबुकमा राखिएको सबै फोटो सीधै गगुल फोटोजमा ट्रान्फर गर्न सकिन्छ । यो टुल हाल आयरल्यान्डमा मात्र लन्च गरिएको छ । तर सन् २०२० को सुरुआती ६ महिनाभित्रै यसलाई विश्वभर लन्च गर्ने योजनामा फेसबुक रहेको छ । यो टुल त्यस्ता गुगल फोटो युजर्सका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ जसले आफ्नो...
फेसबुकले ल्यायो प्रयोगकर्ताले पैसा कमाउने एप, सर्भे र रिसर्चमा भाग लिँदा भइन्छ मालामाल
काठमाण्डौ । लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ ले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउने क्रम जारी राखेको छ । केही समयपहिले ‘फेसबुक पे’ सार्वजनिक गरेको फेसबुकले अहिले अर्काे नयाँ एप सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुकले नयाँ एपमार्फत सर्भे, टास्क र रिसर्चमा भाग लिएबापत भुक्तानी दिने एप लन्च गरेको हो । यी सर्भे र टास्कमार्फत फेसबुकले आफ्नो एप र अन्य...
फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुका डाटा चोरी, हजारौँ एप्समाथि कारबाही
काठमाण्डौ । आफ्ना प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित डेटा चोरी हुने गरी भएको केम्ब्रिज एनलिटिका काण्डपछि फेसबुकले दशौँ हजार एप्सलाई निलम्बन गरेको बताएको छ। निलम्बित एप्सहरू झन्डै चार सय विकासकर्तासँग सम्बद्ध थिए। फेसबुकले सबै एप प्रयोगकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण नभएको बताएको छ। सन् २०१८ मा केम्ब्रिज एनलिटिका नामक कम्पनीले बिनाअनुमति धेरै...
अमेरिकामा फेसबुकलाई साढे पाँच खर्ब जरिबाना गर्ने निर्णय
अमेरिकी नियामकले तथ्याङ्कको गोपनियता कायम राख्न नसकेको मुद्दामा फेसबुकलाई पाँच अर्ब अमेरिकी डलर (साढे पाँच खर्ब नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना तिराउन अनुमति दिएको पत्रपत्रिकाले लेखेका छन्। फेडरल ट्रेड कमिशन एफटीसीले केम्ब्रिज एनलिटिका नामक राजनीतिक परामर्श संस्थाले फेसबुकबाट आठ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क प्राप्त गरेको...
न्युयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इन्टरनेट तथा प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कर लगाउने फ्रान्सेली योजनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका छन्। बुधवार ट्रम्पका व्यापार प्रतिनिधिले भने, "अमेरिकी कम्पनीहरूविरुद्ध अन्यायपूर्ण रूपमा लक्षित डिजिटल सेवा करप्रति अमेरिकाको निकै चासो रहेको छ।" फ्रान्सको संसद्ले नयाँ...
फेसबुकका ५ करोड खातामा आक्रमणको खतरा !
फेसबुकले आफ्नो सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीका कारण ५ करोड प्रयोगकर्ताहरूका फेसबुक खातालाई अनधिकृत रुपमा सूचना लिने ह्याकरहरूले निशाना बनाउन खोजेको जनाएको छ। फेसबुकले आफूले भर्खरै अनुसन्धान थालेकोले त्यस्तो आक्रमण कसले गरेको हो त्यो थाहा नभएको जनाएको छ। उसले कुनै खाताहरूको सूचना दुरुपयोग गरिएको छ कि छैन भन्ने पनि पत्ता नलागेको जनाएको...
दुईघण्टामै जुकरबर्गलाई लाग्यो १६.८ अर्ब डलरको झट्का !
काठमाण्डौ । विश्वचर्चित सोसल मिडिया फेसबुकको बिषयमा भएको स्क्याण्डलले कम्पनीको ग्रोथमा क्षति पुर्याउन थालेको छ । बुधबार फेसबुकको दोश्रो त्रैमाससम्मको सेल्स तथा यूजर ग्रोथ अनुमान गरेभन्दा कम रहेको र कम्पनीले वालस्ट्रिटलाई यो वर्ष यो आँकडामा कुनै पनि सुधार नहुने बताएको कुरा बाहिर आएसँगै लगानीकर्ता निराश देखिएका छन् । फेसबुकका प्रमुख...
विश्वका टप ब्राण्डको सूचिमा चीनको चमात्कारिक प्रगति, फेसबुकभन्दा टेन्सेन्ट अगाडि
काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा महङ्गो र ठूलो ब्राण्डको नयाँ सूचि सार्वजनिक भएको छ, जहाँ टप १० को सूचिमा चीनले २ स्थानमा कब्जा जमाएको छ । विश्वका महंगो ब्राण्डको पहिलो १० सूचिमा चीनले २ स्थानमा कब्जा जमाएको यो पहिलो घटना भएको सिएनएनले जनाएको छ । ब्राण्ड जेडले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने यो सूचिमा चीनको इकमर्स कम्पनी अलिबाबा र सामाजिक...
प्रयोगकर्ताको डाटा लिक प्रकरणले फेसबुकमा मूल्यमा भारी गिरावट, जुकरबर्गले १ दिनमै गुमाए ६.०६ अर्ब डलर
काठमाण्डौ । राजनीतिक विज्ञापन गर्ने कम्पनीका करोडौं फेसबुक प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित डेटा उनीहरुको सहमतिबिना आफूसँग राखेको खबर आएपछि अमेरिकी तथा यूरोपियन सांसदहरुले फेसबुक इंकसँग जवाफ मागेका छन् । यो खबर बाहिरिएसँगै अमेरिकी सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकको सेयर मूल्य सोमबार ७ प्रतिशतले घटेको छ । सेयरको मूल्य घटेका कारण फेसबुकका सीइओ...
यूट्यूवलाई टक्कर दिन आयो फेसबुकको भिडियो वेबसाइटः अहिले दर्ता, भविष्यमा कमाई
काठमाण्डौ । भिडियो बनाउने(भिडियो क्रिएटर)हरुका लागि अब यूट्यूवको दमदार विकल्प समेत आएको छ । यूट्यूवलाई टक्कर दिनका लागि फेसबुकले आफ्नो भिडियो वेबसाइट फेसबुक क्रिएटर लञ्च गरेको छ । यसमा तपाईले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुुहुन्छ, सर्च गर्न सक्नुुहुन्छ र भिडियोहरुलाई लाइक तथा त्यसमा कमेन्ट समेत गर्न सक्नुुहुन्छ । त्यति मात्र होइन,...
समाजसेवाका लागि फेसबुकको १२ अर्ब डलरको सेयर बिक्री गर्दै जुकरबर्ग
काठमाण्डौ । प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले १२ अर्ब डलर रकम जुटाउनका लागि कम्पनीमा आफ्नो निकै ठूलो हिस्सेदारी बिक्री गर्ने भएका छन् । यसरी प्राप्त भएको निकै ठूलो फण्ड उनले सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने बताएका छन् । सो पूँजीको स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा लगाइने उनले प्रष्ट्याएका अन्तराष्टिय संच�...
गुगल, एप्पल र माइक्रोसफ्टले कसरी कमाउँछन् होला ?
काठमाण्डौ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो टेक्नोलोजी कम्पनीको कुरा आयो भने हामी सुरुमै एप्पल, अल्फाबेट(गुगलको मातृ कम्पनी), माइक्रोसफ्ट, अमेजन र फेसबुकको नाम भन्छौ । यी सबै विश्वप्रतिष्ठित कम्पनीको आम्दानी अरबौं डलर रहेको छ । यी कम्पनीहरुले विभिन्न डिजिटल प्रोडक्टस तथा सेवाहरुको माध्यमबाट मोटो रकम कमाउने गर्छन् । भिजुअल क्यापिटलिस्ट...
पैसा चाहियो ? अब फेसबुकले गर्नेछ तपाईलाई सहयोग
काठमाण्डौ । आकस्मिक अवस्थामा मानिसलाई हुने पैसाको आवश्यकता पूरा गर्न विश्वकै नम्बर एक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्नो हात अगाडि बढाएको छ । फेसबुुकले यही प्रयोजनका लागि आफ्नो वेबसाइटमा फण्ड राइजिङ टुुल्सलाई बिस्तार गरेको छ । यो त्यस्तो टुुल हो, जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई समस्या पर्दा उसका साथीभाई र आफन्तहरुसँग जोडिन मद्धत गर्नेछ र यो...